प्रहरीले बम नचिन्दा…………………………. !! - News site from Nepal
प्रहरीले बम नचिन्दा…………………………. !!
काठमाडौं : शुक्रबार मध्यरात अञ्जु साह शौच गर्न बाहिर निस्किइन्।
सँगै अर्को घरको मूल ढोकाको ग्रिलमा शंकास्पद वस्तु देखेपछि उनले श्रीमान् राजेशलाई उठाइन्। रातो झोलामा जे पनि हुन सक्ने आकलन गर्दै राजेशले उक्त घरभित्र सुतिरहेका छोराछोरीलाई बाहिर निकाले। अर्को घरमा लगेर राखे। शंकास्पद वस्तुबारे महेन्द्रनगर इलाका प्रहरीमा खबर गरियो। प्रहरी नआउँदासम्म परिवारका सबै सदस्य शंकास्पद वस्तुबाट टाढै बसे। प्रहरी निरीक्षक अमिरकुमार दाहाल नेतृत्वमा चार सुरक्षाकर्मीको टोली घटनास्थलमा आएको थियो।
त्यस बेलासम्म राजेशले बुवा भिखारी साहलाई फोन गरी घरमा बोलाएका थिए। भिखारी पुर्ख्यौली घरमा बस्दै आएका छन्। ‘इन्स्पेक्टर साबले भन्नुभो– झोलामा केही छैन, तर्साउनका लागि केही राखेको होला’, उनले भने, ‘त्यसपछि झोला हटाउन खोज्दा एक्कासि पड्कियो। म बेहोस भएँ।’ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ।
धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिका–५ महेन्द्रनगर कुसाई टोलमा प्रहरीको कमजोरीले बम विस्फोट भयो। बाबुछोरासहित तीन जनाले ज्यान गुमाए। घरधनी ४५ वर्षीय राजेश, उनका छोरा १५ वर्षीय आनन्दको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो।
बमलाई ‘सामान्य वस्तु’ ठानेर चलाएका प्रहरी निरीक्षक दाहालको उपचारका क्रममा शनिबार बिहान बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मृत्यु भयो।